Japana: Ny Ankizy amin’izao Fotoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2018 18:00 GMT
Inona no ataonao rehefa mankaleo anao ireo ankizivavy tanora mipetraka amin'ny tany ao anaty fiarandalamby, miresaka amin'ny findainy ary manao toy ny any an-tranony, ianao kosa anefa reraky ny tontolo andro avy any am-piasàna ary mba te hiaina fotsiny? Nanapa-kevitra ny lehilahy iray 35 taona ao Yokohama fa tofoka tanteraka izy ka nandaka ilay ankizivavy 17 taona izay nipetraka sy niresaka tamin'ny namany teo akaikin'ity rangahy (rohy maty), toa nodakany mafy ilay ankizivavy ka nidona tamin'ny varavaran'ilay fiarandalamby ny tarehany, nanapaka ny nifiny iray.
Mifangaro ny fomba fijerin'ireo bilaogera an'io tranga io, saingy maro tamin'izany no nangoraka ny fomba fihetsik'ilay rangahy. Ao amin'ny News Impression, manaiky io fomba io ny bilaogera iray:
Mety ho nandaka azy koa aho.
Ireny ankizy diso ampihantaina be ireny izay tsy mivaky loha amin'ny [zavatra] lazainao azy (na mody tsy mahita anao sy tsy mihaino), na dia hamela tsiaro mangidy ho azy aza izany, amin'ny alalan'ny vatany ihany no fomba mandaitra hananarana azy — fanabeazana mahazatra izany!
Nanoratra momba ny zava-niainany nitovitovy tamin'izay sy ny saika nanaovany toa an'io rangahy io (rohy maty) ny bilaogera Fukuro:
Niaina tranga nitovitovy tamin'izao aho.
Niara-nipetraka tamin'ny làlan'ny olona ireo tanora ireo tao anatin'ny fiarandalamby, nafana ny resaka, ary rehefa nidina aho dia fanahy iniako nodikaina ry zareo.
Novandrahako ry zareo, saingy vao niverina nijery ny làlana aho, nikatona ny varavarana ary niainga ilay fiarandalamby.
Raha nivadika ho fifandirana izany…
Manazava ireo olana mifandraika amin'ny ezaka hivoahana ny fiarandalamby ankehitriny ny bilaogera iray hafa:
Ohatra, ambonin'ilay JR [fiarandalamby] tsy misy ilàna azy, tsy maintsy manindry bokotra ianao isaky ny hiditra sy hivoaka mba hamohana ireo varavarana.
Tato ho ato, misy fotoana aho miakatra amin'ireny fiarandalamby ireny ary miezaka manindry ny bokotra mba hidinako, mahita olona mitsangana akaikin'ilay bokotra famohana/fanidína aho, izay milalao ny findainy. Na dia te hanindry ilay bokotra aza aho dia tsy afaka [satria mibahan-dàlana ry zareo].
Mazava ho azy, anivon'ireo olona mitsangana [akaikin'ny bokotra famohana/fanidína] ireo, misy ihany koa ireo tsara fanahy izay, na tsy midina [amin'ny fidinako] aza ry zareo, manindry am-pahatsorana ny bokotra ho ahy. Tsy fahita firy anefa ireny olona ireny ary mila mieritreritra mafy ny fika hanakarako ireo bokotra aho.
Olana iray noresahina tanatinà bilaogy vitsivitsy ny tantara mampifanditra ahitàna ilay “mpandaka” sy ilay “voadaka”. Ao amin'ny NEET no Me, miarahaba ilay mpiasa (pejy voafafa) noho ny fandakàny ilay ankizivavy ny bilaogera iray ary manamarika ity fanontaniana manaraka ity:
Mety ny nataonao, ry mpiasan'ny orinasa!
Anatin'i Japana ankehitriny izay hipetrahan'ireo tanora adala sy hibodoan-dry zareo ny toerana ho an'ny daholobe, toerana lalovan'ny vahoaka, sy hisehoany ho tompon-tanàna, dia seho ho an'ireo andriamanitra tokoa ny fipotran'olona tahaka izao — naman'ny fahamarinana.
Tsy misy antony tokony handakan'ilay rangahy 35 taona tampoka ankizivavy tsy nanao na inona na inona, noho izany azo antoka fa io ankizivavy io no nitarika ny zava-drehetra.
Tsy miresaka afa-tsy izay zavatra metimety aminy ireo karazan'olona vendrana toy ireny,
Hany ka na ampitandremina aza ry zareo, tsy hiaiky izany fa ninia tsy nihaino [ilay fampitandremana].
Tsy ny rehetra no nihombon-kevitra tamin'io lehilahy io (na dia tsy nampoizina aza ny hamaroany), ary maro tokoa ireo nitsikera ny andaniny sy ny ankilany. Nanontany ny bilaogera iray raha olana avy amin'ny tanora ihany izao, mitantara ny zava-nisy mifandray amin'ny tsy fahalalam-pomban'ireo antitra:
Tena tsy mahalala fomba ireo lehilahy sy vehivavy zokinjokiny sy antitra ka saika tsy ninoako izay hitako.
Misy olona 50 ka hatramin'ny 70 taona mankao amin'ny trano fanaovana karaoke manoloana ny orinasa iasàko, ary tsy misaina loatra izy ireo rehefa mametraka ny fiarany ka mamoaka azy ireo ao anaty arabe. Ho fanampin'izay, rehefa miala ny toerana fametrahana fiara ivelan'ilay trano ry zareo, miresaka mafy be amin'ny finday indray. Isanandro izany no miseho.
Farany, hahazoanao sary an-tsaina ny zava-niseho, jereo ny sary navoaka tao amin'ito bilaogy (pejy voafafa) ito.